अर्का एक जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको पुष्टि, नेपालमा ११ जना पुग्यो – Namaste Dainik
June 5, 2020 NamastedainikLeaveaComment on अर्का एक जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको पुष्टि, नेपालमा ११ जना पुग्यो
काठमाडौ । क्वारेन्टिनबाट घर फर्केपछि मृत्यु भएका पश्चिम सुर्खेतका युवकमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले सो कुराको पुष्टि गर्नुभएको हो । उहाँले नियमित मिडिया ब्रिफिङमा बिहीबार बिहान होम क्वारेन्टिनमा मृत्यु भएका पञ्चपुरी नगरपालिका–१ का २० वर्षीय युवकको मृत्युपछि पिसीआर परीक्षणमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताउनुभयो ।
पञ्चपुरी नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष धनबहादुर थापाका अनुसार यही जेठ ९ गते भारतको मुम्बइबाट आएका उनलाई अन्य ५४ जनासँगै विद्यापुरस्थित जनता मावि क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो । बुधबार साढे ४ बजे आरडिटी गर्दा नतिजा नेगेटिभ आएपछि उनलाई होम क्वारेन्टिन बस्ने शर्तमा पठाइएको थियो । सोही राति साढे १२ बजे घर पुगेका ती युवक नजिकैको मौरीपालन स्रोत केन्द्रको भवनमा बसेका थिए । वडाध्यक्ष थापाले कोरोना पुष्टि भएपछि उनीसँगै आएका अन्य युवा र क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिको स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
नगरप्रमुख उपेन्द्रबहादुर थापाले लाशलाई प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेको र वीरेन्द्रनगरबाट सेनाको टोली आइपुगेपछि व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिनुभयो । सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर खड्काले लाश व्यवस्थापनका लागि वीरेन्द्रनगरबाट नेपाली सेनाको टोली खटिएको बताउनुभयो ।
भेन्टिलेटर र आईसीयूका लागि प्रत्येक प्रदेशलाई २ करोड रकम !
कोरोना आतंक मच्चाइरयेको बेला, अमेरिकामा आँधीले दियो थप पीडा, ३० जनाको मृत्यु।